SEENAA GABAABDUU MAHDII HAAMID MUUDEE (1950-2021) – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSEENAA GABAABDUU MAHDII HAAMID MUUDEE (1950-2021)
Ulaagaa maalummaa saba tokkoo beeysisanif afaanii fii aadaan bu’ura. Gama biraa tiin, afaan utubaa sabaa ti. Yo inni jiraate sabni jiraata. Inni duunaan akkuma yaroo utubaan caphu manni diigamutti, sabni niis dhabame. Minilikii fii Habashoonni biyya inni dirqiin haqaare-rratti abbooman warra haala kana sirritti hubate. Hubannoota kanarraa ka’uun Oromoo fii afaan isaa adda baasuuf wal’aansoo, arrallee adda hin citin, godhaa jiru.
Horteen nafxanyyaa, waan diina tahaniif, afaan Oromoo dhabamsiisuuf halkanii fii guyyaa itti duuluun ajaa’iba namatti hin tahu. Kan nama dinqu, inni lammii Oromoo-rraa tahe duula kanaaf guuza ooluu dha. Fakkeenya kanaa tiif seenaa Ayyuub Abuubakar mil’achuun ni dandayama.
Muddee 13, bara 1960, mootummaa Hayle Sillaasee gara-galchuuf ijibbaata Mangistuu Nawaay faan godhan irraa qooda qabdaan waan fardaa-lafaan barbaadameef, Ayyuub, biyyarraa baqachuu dirqamee, walakkaa bara 1961 Soomaaliyaa seene. Yaroon Ayyuub biyya Soomaalee itti seene, yaroo mootummaan biyya sanii, nama raadiyoona isii keessaan Xoophiyaa-rratti olola ooftuuf itti barbaaddu ture. Saniif, Ayyuub akkuma achi seeneen, hujii tanaaf mindaawee, nama Geetachaw Gaarradaw ja’amu waliin, wal faraqaa, afaan Amaaraa tiin, mootummaa Hayle Sillaasee-tti olola dhawwaaqutti seene.
Haalaa akkanatti deemu, dhuma sagantaa qophii isaa, Ayyuub, Afaan Oromoo tiin dhaamsa xixiqqaa daddabarsuu jalqabe. Haalli kuni, mootummaa Habashaa bira dabree, kan waahelaaf eegu dallansiise. Waahelli Ayyuub, ilmi Gaarradaw Cuuphataa, Ayyuub afaan raadiyoona-rratti ittiin haasawuun dhoorkamaa taheen dhaamsa dabarsaan baannatamee, biyya alagaa keessatti mana heeraa dhaabbate. Dubbiin akkasitti jalqabde, ji’a Birraa tan bara 1962 keessa, raadiyoona Soomaalee-rraa faraqaa afaan Gaallaa (Oromoo) tiif karaa bantee, Ayyuub gaggeessaa isii muudame.
Geetaachoon, absumaan Cuuphataa, Oromtichi, biyya Soomaalee keessatti afaan isaa gatee, kan Amaaraa tiif abokaattoo dhaabbate. Gama biyya keessaa tiin durii fii arrallee, Oromoonni kan isaaniitti duuyda galanii, afaanii fii aadaa Amaaraa goddisuu keessatti qooda leencaa gumaachan heddu. Haala kanaaf, Xaggaayee Gabre Mad’hin, Xilaahun Gassasaa fii Buzunesh Baqqalaa fakkeenya laachuun ni dandayama.
Haalli ilma Gaarradawii fii jara olii afaanii fii aadaa isaaniitti duuyda galche, karoora Oromummaa dhamasiisuu tan Minilikiin jalqabamtee nafxanyaa fii gantootaan hamma yoonaa gaggeeyfamaa jirtu. Karoora Xoophiyummaa fii amantii hagooggatee, waahelummaa goobanootaa fii gantootaa tiin Oromoo fii Oromummaa-rratti, heera malee, baroota dhibbaa fii shantamaaf bobbaafamaa jiru, milkooma hanqisuu fii hoongeeysuu-rratti murannoo cimtuun warra hojjatan keeysaa tokko Mahdii Haamid Muudee ti. Mahdiin abbaa isaa Haaji Haamid Muudee Urgee fii haadha isaa Hamiidaa Aammad Qallaa-rraa, Gurraandhala 01, bara 1950, Baha Oromiyaa, Godinaa Ituu, Aanaa Ciroo, magaalaa Ciroo, ganda maqaa abbaatti moggaafametti, nama dhalate.
Mahdiin, afaan isaa, afaan Oromoo, tiif anaannachuu kan jalqabe joollummaa ni. Maddi kanaa mana barnootaa ti. Gaafa akka barnoota ammayyaa baratuuf mana barnootaa geeyfame, Maahdiin afaan isaa malee kan Amaaraa hin beeku ture. Manni barnootaa ammoo afaan Amaaraa malee kan isaa kan hin dhageenye itti tahe. Kanaaf Mahdiin mana barnootaa keeysatti duudaa ykn nama afaan hin beeyne tahee arkame. Duudaa tahuun Mahdiif rakkoo hin turre. Dhibdeen afaan Oromoo dubbachuu isaa-rraa arraba, salphinaa fii tuffii, barsiiftoota-rraa kaasee hamma barattootatti itti xiyyeeffamuu dha.
Lakkuma daa’imummaa keessaa bahee hubannoonni sammuu cimaa dhufeen, Mahdiin, arraba malees, qoosaa fii qishnaa mana barnootaa keeystti itti godhamaa jirtu hubachuu dhufe. Haalli mana barnootaatti isa mudachaa jiru, sadarkaa duraatti kan silaa fedhii barnootaaf qabu keessatti cabsu ture. Yo san hanqate ammoo, akkuma daa’imoota yaroo saniitti, isaa fii afaan isaa adda baasee, akka inni baanutti, kan isa Amaareeysu ture. Mahdiin ammoo, karoora nafxanyaa lameenii fuu oggoluu dide. Afaan isaa dubbachuu-rraa arraba, salphinaa fii tuffii mudachuun, inumaa, afaanii fii aadaa isaa waliin caalaa walitti kan hidhu tahe.
Mahdiin barnoota kutaa duraa magaalaa itti dhalatetti baratee tan lamadaa tiif Dirree Dhawaa bu’e. Achitti Mana barnoota Lula Raasa Makoonninitti kutaa sagalii fii kudhan akka barateen cimina barnootatti qabuun filamee mana barnoota Luul Ba’ida Maariyaam kan Finfinnee, kan barattoota qaroo qofaaf ramadame geeyfame. Amata lama booda, achirraa, qabxii ol aantuun kudha lama goolabee, Universitii Finfinnee damee Kiiloo Afuriitti barataa saaynsii galmaawe. Akka barnoota universitii xumureen, magaalaa itti dhalatetti barsiisaa mana barnoota kutaa lamadaa tahe.
Gama biraa tiin, lakkuma umrii fii barnootaan if dura deemuun,
Mahdiin afaanii fii aadaa isaa if barsiisutti bobbahe. Yaroo banoonni hin jirre baadiyyoota keessa daddeemee, mangoddootaa fii hayyootarraa afaan, aadaa fii seenaa saba isaa qorachuu fii if barsiisuu hoojumfate. San malees, daddacha yaa’ii ummataa-rraa qooda fudhachuun akkaataa lammiin dhibdee isaanii itti hiikkatan, kan wal-dhabe itti araarfatanii fii wal yakkan irraa qarooma dhudha’utti seene. Hadraa manzuumaan afaan Oromoo keessaa dhaawwaaqamtu abuuruun walaloolee manzuumaa keeysaan akkaataa afaan Oromoo ittiin barreeyfamu qorachutti seene. Fedhiin afaan isaa baruu fii guddisuu, oduma isa ooftuu Sheekh Bakhrii Saphaloo, hayyuu afaan Oromoo, tiin walitti fidde.
Mahdiin, eega haala Sheekh Bakhrii bare booda, hawwiin gaaf tokko ilmaan Oromoo afaan isaanii tiin barachuu qoma keessati uumamte. Hawwii tana warra hujiirra oolchan keessa tokko tahuu murteeyfatee, qamaa fii qalbiin itti bobbahe. Bobbaan bareeyfamoota waa’ee afaanii hedduu dubbisiifte. Haala qubee Arabaa tan Gi’izii fii Laatin akkaan qorachiifte. Tan keessaa, tan afaan Oromoo tiif taatu wal madaalchifte.
Mahdii haala akkanaa keeysa jiru, bara 1974, fincilli ummataa Hayle Sillaasee, kan “yo maqaa isaa tiin doorsisan galaanni yaa’ulleen ni dhaabbata” ja’amaa ture siree-rraa fonqolchee Dargii yaabbachiise.
Dargiin akka aangoo qabateen irratti abboomuuf barattoota Mooticha-rratti fincilaa turan magaalota keeysaa gara baadiyyootaa-tti firraa fageeysuuf, Onkololeessa 12, bara 1974, karoora “Misooma Waloo – Duula Qaroomaa fii Hujii” kan gabaabinatti, maqaa Zamachaa ja’amuun beekkamu labse.
Karoorri kuni barattootaa fii ummata baadiyyaa (Oromoo) walitti fiduu malees, haala ummanni afaan isaanii tiin itti baratan kan aanjeeysu tahee as bahe. Mahdiin, kan kana sirritti hubate, qormaata afaan Oromoo barreeysuu-rratti godhaa ture, qindeeysitoota karoora Zamachaa tiif dhiheeyse.
Qormaanni Mahdiin afaan Oromoo barreeysuu fii dubbisuu-rratti jaraaf dhiheeyse, qubee Laatiinii fii tan Gi’iziin ture. Mahdiin waan lameen dhiheeyseef qaba. Qormaata lameen keeysaa kan qubee Laatiniin dhiheeyfame, afaan Oromoo ittiin barreeysuu akka tahu agarsiisuu fi. Kan qubee Gi’iziin dhihaate ammoo, afaanicha ittiin barreeysuun akka hin dandayamne sirritte agarsiisuu fi. Gaggeeysitoonni Zamachaa garaa-garummaa lameenii sirritti hubatanillee, warra qubee Gi’iz afaan Oromoo tiif filu tahan. Mahdiin irra daddeebi’ee jara amansiisuuf yaalullee, jarri qubee Laatiin afaan Oromoo tiif quudhuu didan.
Wanni gaariin ijibbaata Mahdiin godherraa arkame, inni/Mahdiin, damee farra-wallaalummaa ykn jaahilummaa dhabamsiiftu tan waajjira Zamachaa jala jirturratti itti gaafatamummaa afaan Oromoo muudamuu dha. Mahdiin hujii irratti ramadameen yaroo duraa tiif kitaabni, afaan Oromoo lama, kan farra-waallalummaa fii barsiisa herregaa, qubee Gi’iziin, akka maxxanfaman godhe.
San booda, bara 1975 keeysa, murannoo afaan Oromoo guddisuuf qaburraa ka’uun, gaazeexaa maqaa “Bariisaa” moggaaseef, qubee Gi’iziin afaan Oromoo tiin bareeysee maxxansuu jalqabe.
Yaroo Mahdiin karaa Bariisaa tiin afaan Oromoo guddisuuf itti marxifate tuni, yaroo, horteen nafxanyaa tan maqaa Ihaappaa tiin if jaarte, akkuma ammaa kanatti, Oromoo fii Oromummaa gurraan dhagayuu itti hin barbaanne ture. Gochi isaa Ihaappaa malees, mootummaa fii warra Me’eesoon birattiis kan ija diimtuu agarsiisu tahe. Keeysaa huu, yaroo garii, qubeen Laatiin tan Gi’iz caalaa afaan Oromoo ittiin barreeysuuf sirrooma qabaachuu agarsiisuuf waan irratti barreeyfamuuf, yaroo sanitti, hegereen Mahdii, waahellanii fii Bariisaa harka Rabbii turte jechuun ni dandayama.
Odoo haalli akkasitti jiruu, Mahdiin, dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo tiif, hujii, firaa fii aalii dhiisee, Onkololeessa 10, bara 1977 jaallan waliin Hululi-rraa ka’uun, amna miilaa tan guyyaa saddeetii booda, biyya Jabuutii seene. Achirraa Sa’uudii dhaqe. Baroota hamma tokko Biyya Sa’uudii akka jiraateen, akki manaa itti bahe hanqatee, Hagayya 11, bara 1982 hiree qubsumaa tiin biyya Ameerikaa seene.
Amna jiruu baqaa keessaa fii eega Ameerikaa qubatees, Mahdiin guddina afaan Oromoo tiif dhimmamuu takkaa hin dhiifne. Jiruu biyya Faranjii tan oriisaan isii hara nama hin fudhachiifne keessatti, yaroo hujii-rraa haftuuf kan irratti dabarsu irbuu gaafa joollummaa afaan Oromoo tiif seene. Ragaan kanaa Kuusaa maqaa “Oromo Dictionary” moggaaseef kan jechoota afaan Inzilizii kuma soddomii ol afaan Oromoo-tti hiikee, bara 1995 maxxanse.
Kuusaan akka kitaaba Mahdii, kan fuula dhibba sagalii ol qabu, qaariyaa dhaabotaa ykn nafaqaa mootummaa tiin, namoota hedduun, kan qophaawuun irra ture malee, kan hujii nama tokkoo hin turre. Mahdiin garuu, karoora guddaa bara kudha torbaa ol irraa fuudhateef nafaqaan godhate, murannoo sab-boonummaa cimtuu qofa ture.
Kuusaan Mahdii guddiina afaan Oromoo haala ajaa’ibaatti Oromoo bira dabree firaa fii alagaaf mirkaneeyse. Qormaata afaan Oromoo tiif daandii haaraya saaqe. Warra irraa barachuu barbaadaniif, kuurii jechootaa kan qabiyyeen keeysaa dubbuuyfamee hin dhumne tahe. Sanirratti afaan Oromoo akkuma kan Ingilizii sooreeysa tahuu agarsiise.
Kuusaan humna yaroo dheertuu malees Mahdii-rraa qabeenya hedduu fudhate. Kitaabichi sadarkaa Oromoo boonsutti akka maxxanfamu godhuuf horii itti dhangalaasullee, gaafa gurguraaf dhiheeyse, akka silaa hawwetti hin simatamneef. Akki san Mahdii naasisullee, murannoo afaan Oromoo guddisuuf qaburraa if duuba hin deebifne.
Mahdiin Kuusaa isaa tiin haa beekkamuu malee, isa malees kitaabban Xalayootaa fii Walaloota Bariisaarratti barreeyfaman biratti, kanneen barnootaa torba maxxanse. Gama biraa tiin, kitaaba seenaa tii fii kanneen biraa warra odoo hiree maxxansuu hin arkatin biraa boqote hedduu barreeysee jira.
Mahdiin guddina aadaa Oromoo tii fiis warra bu’ura lafa kaayan irraa tokko. Haala kanaaf, karoora agarsiisa aadaa Oromoo tiif, dubraa fii dardara godinaalee Oromiyaa hunda keeysaa Gurraandhala 28, bara 1976, Magaalaa Finfinneetti walitti fide warra qopheeysan keeysaa Mahdiin tokko. San malees, gaafa biyya Ameerikaa magaalaa Atlaantaa keessa jiraachaa ture, sagantaa raadiyoonaa kan Sagalee Oromiyaa moggaaseef yaroo dheertuuf mataa isaa tiin qopheeysee gaggeeysaa ture.
Duuba, Mahdiin, haala olii kanaan, afaan Oromoo tiif odoo hifannaa malee carraaquu, baqaysaa hidda dhiiga onnee tiif ji’a lama dura godhamteef irraa kabsachuu dadhabee, Amajjii 22, bara 2021 firaa fii aalii males, ilmaan afurii fii haadha warraa hadiyyoomsee, magaalaa Kileevlaand (Cleveland) tan kutaa Ohaayoo (Ohio) biyya Ameerikaatti, umrii torbaatamii tokkotti, bakka kan dhalte hundi irraa hin oolletti godaane.
Mahdiin nama obboleeyyan soddoomii shan waliin dhalate. Nama arjummaa fii sab-boonummaan faayame. Kan fedhiin bilisummaa onnee keeysa danfitu. Taphataa, xiqqaa fii guddaa kabajaa fii jaalalaan simatu. Hayyuu fii barsiisaa barataan wa irraa baratee hin quufne.